पर्यटन कर के हो र यो यूरोपमा कहाँ लागू हुन्छ? | यात्रा समाचार
मरियम | | हाम्रो बारेमा, यात्रा
जुलाई महिनाको बार्सिलोनाले भ्रमणका लागि नयाँ पर्यटक करलाई अनुमोदन गर्यो, जुन होटल प्रतिष्ठान र क्रूजमा पहिले नै लागू गरिएकोमा थपिने छ। या त कन्डल शहरलाई पर्यटकको भीडबाट बचाउन नगर परिषदको प्रयासका कारण वा पैसा स to्कलन गर्ने चाहनाको कारण, सत्य यो हो कि उनीहरू भेनिसको स्थानीय सरकारले जाँदै गरे झैं जिम्मेवार पर्यटनका लागि उपायहरू अपनाउन प्रयास गरिरहेका छन्। २०१ St. बाट सेन्ट मार्क स्क्वायरमा पहुँच नियमित गर्नुहोस्।
तर तथाकथित पर्यटन करले पर्यटकहरूलाई कसरी असर गर्छ? जब हाम्रो बिदाको लागि भुक्तान गर्दछौं हामी अन्तिम दरमा आफैलाई अन्तिम दरका साथ पाउन सक्दछौं। अर्को पोष्ट नभुल्नुहोस् जहाँ हामी पर्यटन कर के हो भन्ने बारेमा कुरा गर्ने छ, किन यो लागू हुन्छ र कुन गन्तव्यमा यसलाई समावेश छ।
बार्सिलोना वा भेनिस मात्र यूरोपियन शहरहरू होइनन् जुन पर्यटक कर लागू गर्छन्। विश्वका धेरै गन्तव्यहरूमा तिनीहरू पहिले नै लागू गरिएको छ, जस्तै ब्रसेल्स, रोम, बेलारिक टापु, पेरिस वा लिस्बन।
1 पर्यटक कर के हो?
2 हामीले किन पर्यटक कर तिर्नु पर्छ?
3 पर्यटक दरहरू विस्तृत रूपमा
3.1 हवाई करहरू
3.2 प्रति बसाई शुल्क
3.3 युरोपमा पर्यटक करहरू
3.3.2 यूरोपमा अन्य देशहरू
पर्यटक कर के हो?
यो एक कर हो जुन प्रत्येक यात्रुले एक निश्चित देश वा शहर भ्रमण गर्दा तिर्नै पर्छ। यो कर सामान्यतया हवाई टिकट बुक गर्दा वा आवासमा लिइन्छ, जबकि त्यहाँ अन्य सूत्रहरू छन्।
हामीले किन पर्यटक कर तिर्नु पर्छ?
सहर काउन्सिल र सरकारहरूले पर्यटक कर लागू गर्छन् पर्यटक पूर्वाधार र गतिविधिहरु को बिकास को लागि एक कोष को नियत गर्न को लागी, विकास र संरक्षण को लागी। अर्को शब्दमा, सम्पदा संरक्षण, पुनर्स्थापना कार्यहरू, स्थिरता, आदि। संक्षेप मा, पर्यटक कर एक कर हो जुन शहरमा सकारात्मक रूपले फर्किनु पर्छ जुन भ्रमण गरिएको छ।
पर्यटक दरहरू विस्तृत रूपमा
जब तपाईं एउटा उडान बुक गर्नुहुन्छ, एयरलाइनले हामीलाई सुरक्षा र ईन्धन लागतहरू कभर गर्नको लागि शुल्कहरूको एक श्रृंखला लिन्छ। तिनीहरू सामान्यतया टिकटको अन्तिम मूल्यमा समावेश हुन्छन् र एयरपोर्ट सुविधाहरू र हवाई यातायातको प्रयोगमा कर लगाउँछन्।
अर्कोतर्फ, त्यहाँ अर्को कर छ जुन देश छोड्ने यात्रुहरूलाई लागू हुन्छ। तिनीहरू एक्जिट शुल्कका रूपमा परिचित छन् र मेक्सिको, थाईल्यान्ड वा कोस्टा रिका जस्ता देशहरूमा लागू हुन्छन्।
प्रति बसाई शुल्क
यस पर्यटक कर होटल र पर्यटक आवास मा रहन्छ (छुट्टी को उपयोग को लागी घरहरु सहित) मा लगाइन्छ र होटल बिल भित्र आइटम गरीएको छ वा अलग चार्ज, यद्यपि कुनै पनि मामला मा यो VAT का अधीन छ (१०% को दर)। पर्यटक प्रतिष्ठानहरूले यसलाई स collect्कलन गर्दछ र त्यसपछि यसलाई सम्बन्धित कर एजेन्सीसँग त्रैमासिक बसाउँदछ।
स्पेनमा, प्रत्येक स्वायत्त समुदायको पर्यटक करको सम्बन्धमा आफ्नै नियम छ, तर उनीहरूले संग्रहलाई दिगो पर्यटनको लागि कोषमा बाँडफाँड गर्छन्।e जसले पर्यटन सम्पत्तिहरूको संरक्षण, रखरखाव र प्रबर्धन र तिनीहरूको शोषणको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको अनुमति दिन्छ। संक्षेप मा, ती प्रतिक्रिया प्रदान गर्न र क्षेत्र लाई बढावा दिन प्रयोग गरिन्छ।
युरोपमा पर्यटक करहरू
स्पेनमा अहिले क्याटालोनिया र बेलारिक टापुहरूमा केवल टुरिष्ट ट्याक्स मात्र भुक्तान गरिएको छ। पहिलो समुदायमा यो होटल, अपार्टमेन्ट, ग्रामीण घरहरू, क्याम्पसाइटहरू र क्रूजमा लागू हुन्छ। राशि स्थापनाको स्थान र यसको कोटीको आधारमा प्रति दिन ०..0,46 र २.२2,25 युरो बीचमा भिन्न हुन्छ।
दोस्रो समुदायमा, पर्यटक कर क्रूज जहाज, होटेल, होस्टल र पर्यटक अपार्टमेन्टहरूमा लागू हुन्छ। करको दर 0,25 र २ यूरो बीच प्रति आगन्तुक र रात आवासको कोटीमा निर्भर गर्दछ। कम मौसममा दर कम गरिएको छ, साथ साथै आठ दिन भन्दा लामो रहनको लागि।
यूरोपमा अन्य देशहरू
आधा भन्दा बढी युरोपेली देशहरूले यस क्षेत्र लाई बढावा दिनको लागि पर्यटक कर लागू गरिसकेका छन्। ती मध्ये केही निम्न छन्:
रोम: and र star स्टार होटलहरूमा तपाईले4यूरो भुक्तान गर्नुहुन्छ जबकि बाँकी कोटीहरूमा तपाई प्रति व्यक्ति र रात २ युरो तिर्नुहुन्छ। १० बर्ष भन्दा मुनिका बच्चाहरुले यो शुल्क तिर्नु पर्दैन।
मिलान र फ्लोरेन्स: होटलमा प्रत्येक सिताराको लागि प्रति व्यक्ति र रात १ युरोको पर्यटक कर लागू गरिन्छ।
भेनिस: पर्यटक करको रकम मौसम अनुसार, होटल अवस्थित क्षेत्र र यसको वर्गमा फरक पर्दछ। उच्च मौसममा प्रति रात १ युरो र तारा भिनिस टापुमा चार्ज गरिन्छ।
फ्रान्समा पर्यटक कर देशभर लागू हुन्छ र होटल कोटि वा कोठाको मूल्यको आधारमा ०.२० देखि 0,20० युरो बीच भिन्न हुन्छ। उदाहरण को लागी, रहनका लागि अतिरिक्त २% चार्ज गरिन्छ जसको मूल्य २०० यूरो भन्दा बढी छ।
बेल्जियममा पर्यटक कर शहर र स्थापना को कोटी मा निर्भर गर्दछ। ब्रसेल्समा यो देशको बाँकी स्थानहरू भन्दा उच्च छ र १-तारे होटेलहरूको लागि २.१2,15 युरो र--सितारा होटलहरूको लागिeयूरो, प्रति कोठा र हरेक रातको दायरा छ।
राजधानी, लिस्बनमा, पर्यटक कर कुनै पनि होटेल वा स्थापनामा बस्ने प्रत्येक आगन्तुकको लागि १ यूरो हो। यो शहर मा रहन को पहिलो हप्ता मा मात्र लागू हुन्छ। १ 1 बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरूले यसलाई भुक्तान गर्दैनन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » पर्यटन कर के हो र यो यूरोपमा कहाँ लागू हुन्छ?
नुहाउनका लागि स्पेनमा clean सफा समुद्र तटहरू